Sweatshirt yemusikana LY20-040
Chimiro No.: LY20-040
Mucheka: 100% dehwe redonje, 280gsm
Zvishongedzo: Elastic tepi, Rhinestone
Feature: Raglan ruoko + 3pcs mapaneru ane mbishi kumucheto mesh mumaviri mavara
Hurukuro: Kuiswa kupurindwa nematare akaomeswa, Fur chigadziko chakashongedzwa
YeVarume Mitambo Hoddies SX-2183
Chimiro No.: SX-2183
Ruvara: Dema / Lt.Grey / Dzvuku
Saizi Range: SML-XL-XXL
Mucheka: 70% donje 25% polyester 5% spandex dehwe, 260g
Chishongedzo: Chipurasitiki zipi, Heringbone tepi, Hood dhizaini
Hurukuro: Kuiswa rabha kudhinda kuruboshwe chipfuva & ruoko, Cheka & sewn mapaneru papfudzi & ruoko, Kangaroo homwe
Varume Hoddies SH-965
Chimiro Hapana. SH-965 Yekuwedzera: Isina mvura nylon zipi, Sirivha inoratidza zipi, Heringbone tepi, Elastic tambo, Eyelet, Chipurasitiki chimiso Feature: Cheka & sewn mapaneru kumberi kwemuviri, ruoko & pabendekete Mashoko: Zvese-zvakapetwa pane chikuru jira, Fake homwe neSirivha inoratidzira zipi + inoratidzira kudhinda pane chipfuva chekuruboshwe. Sweatshirt iri mufashoni muma1980 ndiyo yakajairika muhupenyu hwazvino hwevanhu, uye zvakare inova yakakosha mbatya dzekupfeka. Panyaya yekuita ...
Polo yehembe Polo SX-2349
Chimiro No.: SX-2349
Saizi Range: SML-XL
Mucheka: 100% donje pique, 210g
Chishongedzo: Bhatani repurasitiki, Yakarukwa tepi, Flat-Rib
Hurukuro: Zvese-zvakaprindwa + Embroidery
Yevanhu Tambo T-shirt SH-693
Feature: Anofema Mhinduro: Kwese-kudhinda T-shati musanganiswa weunyanzvi uye fashoni uye inodziya kukanganisa kweruvara uye pateni, iyo inosimbisa vechidiki vechidiki uye kuzivisa hunhu. Dhizaini yakapusa asi isiri nyore T-shati chaiyo. Hazvina mhosva kuti iri T-shirt chena muzhizha kana juzi muchando, kudhinda tsamba kwakakosha. Dhizaini yekudhinda kwemafashama emigwagwa inonyanya kutevedzera pateni kana ruvara neinosimudzira yekunzwa. Iyo p ...
Polo yemurume hembe SH-732
Chimiro No.: SH-732 Chishongedzo: Bhatani repurasitiki, Rakavezwa tepi, Flat-Rib Mataurwo: Zvese-zvakapetwa + Embroidery Nekufarirwa kwemafashoni evarume, Men's Polo jira rine yakazara tsamba iri kuwedzera kuve inozivikanwa. Iyo diki Polo yakarukwa jira neyakagwinya uye inobata maziso inonzwa zvakare ine yakasimba kudzoka. Iyo pique uye yakajeka yakarukwa machira akashongedzwa muchikamu chevarume polo shati kuburikidza neruvara bharanzi splicing, inopenya ruvara rwakafara mutsetse uye tsamba kudhinda. Kunyangwe iri pique ine ...
Shorts Yevanhu B300155
Chimiro No.: B300155 Chishongedzo: Elastic, Drawcord Mazwi: Kuiswa rabha kudhinda, Patch muhomwe nekudhinda kurudyi kumashure Seimwe yezvinhu zvakajairika zvezuva nezuva zvinhu, zvikabudura zvinozivikanwa nevatengi gore rese. Mhepo yekushanda ichiri kufarirwa, mutambo wakasununguka uye wakapusa unoratidza pfungwa yakasimba yekumodhizaiza, inova kunetsekana kutsva. Panyaya yetekinoroji, iko kusanganiswa kwemavara uye zvinhu zvichiri kuita kwekutungamira kwevagadziri, izvo zvakare zvinopa iwo manyorerwo hukuru hukuru ...
Yevasikana inodziya leggings / XN-8037
Iyi legging inokodzera, iyo yakakosha panguva yechando, inogadzirwa neyakaonda, yakaoma, isina kusimba uye yakapfava mirco velvet. Iri jira rakanaka haringodziyi chete, asiwo rinoshanduka uye riite zvepedyo. Iyo ine yakakwira standard ganda inoenderana, iyo fluff haisi nyore kupukutwa uye kukurirwa, uye inogara yakasimba uye isiri nyore kuoma uye kuumbika uye kuunyana mushure mekudzokorora kuwacha. Iyo yakapetwa-yakapetwa ficha inopa yakanaka kwazvo kupokana nemhepo uye inogara-inodziya-inogara. Bhandi racho rakagadzirwa nemucheka wemuviri ne ...
Bhurugwa refu revarume SH-973
Chimiro No.: SH-973 Chishongedzo: Elastic, Drawcord, Nylon zipper Feature: Cheka & sewn mapaneru kumberi mativi Mashoko: Kuiswa kunoratidzira kudhinda kumberi kwepaneru, Patch homwe kumashure kurudyi Ichi chigadzirwa chinoshandisa kufukidza ruvara musiyano kupatsanurana kuti upe chikuru kuona. kukanganisa, uko kunokwezva sekuita kwakanaka kwekuratidzwa nesekisi. Iyo yakasarudzika maitiro inokodzera vechidiki vatengi mapoka. Iyo yakapararira solid color splicing inopa yemitambo bhurukwa rakazvimirira uye rechisikigo perso ...